ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (၁.၆.၁၉၉၂) ရက်နေ့မှ (၃၀.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသော သင်တန်းများ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏ကြီးကြပ်မှု၊ Golden Myanmar Butterfly Travels & Tours Co.,Ltd ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဧည့်သည် (၃) ဦးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက် နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့အထိ မြန်မာရွှေလိပ်ပြာအပျော်စီး ရေယာဉ်ဖြင့် မန္တလေး-မိုးတား-တကောင်း-ကျောက်မြောင်း-စစ်ကိုင်း-ရန္တပို-ပုဂံခရီးစဉ်များသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါဧည့်သည်များသည် မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှတဆင့် ပြည်ပသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အတူ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့်ပင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ဧည့်သည် (၂) ဦးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့အထိ မြန်မာရွှေလိပ်ပြာအပျော်စီးရေယာဉ်ဖြင့် မန္တလေး-ရှိန်းမကား-သပိတ်ကျင်း-တကောင်း-ကသာ-ဆင်စခန်း-ဗန်းမော်-မန္တလေး-သီပေါ-မန္တလေး-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် ဒုတိယ မြစ်ကျဉ်းသဘာဝအလှအပရှုခင်းများ၊ ရေလုပ်သားတို့၏ လူနေမှု ဓလေ့စရိုက်နေထိုင်မှုပုံစံများ၊ ဆင်စခန်း၊ ရိုးရာအိုးလုပ်ငန်းနှင့် ညနေနေ၀င်ဆည်းဆာအလှအပများအား ခံစားသိရှိလို၍ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း စသည့်ခရီးစဉ်များကို ပိုမိုတိုးတက်လည်ပတ်လျှက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၃၀) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ(၆) ရက်နေ့အထိ တာချီလိတ်နယ်စပ် ၀င်/ထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ညအိပ်/ နေ့ချင်းပြန်ခရီးစဉ် လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသား (၂၀၃၄၄) ဦးနှင့် တတိယနိုင်ငံသား နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်(၂၄၆)ဦး၊ မိုင်းဖြတ်၊ ကျိုင်းတုံ ခရီးစဉ်အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသား အများစုပါဝင်သော တတိယနိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် (၄၄၃) ဦး၊ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်သို့ ဗီဇာဖြင့် (ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရ) နိုင်ငံသား အပါအ၀င် လာရောက် လည်ပတ်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည် (၁၀၁၅) ဦး ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ညအိပ်ခရီးစဉ် လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မိုင်း ဖြတ်မြို့ရှိ မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရာစေတီ၊ ဈေးတန်းကြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သမိုင်းဝင်ဆုတောင်းပြည့် ဆံတော်ရှင်စွန်တောင်းစေတီ၊ ကျိုင်းတုံမြို့အ၀င် ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ မဟာမြတ်မုနိ၊ ဟိုခုံ ကျောင်း၊ မြဘုရားကျောင်း၊ ကျိုင်းရင်းဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ၀ပ်အင်းကျောင်း၊ စွန်တောင်စေတီ၊ ကျော့မ်ဆရီစေတီ၊ ရမ်ကုန်းကျောင်း၊ ပါလျန်ကျောင်း၊ ရပ်တော်မူ၊ သစ်တစ်ပင်တောင်၊ ကမ္ဘာအေး စေတီ၊ စံပြယန်းလောကျေးရွာ၊ ကတ်တောင်ကျေးရွာအနီးရှိ ကိုးထပ်ရေတံခွန် စသည့် အထင်ကရ နေရာများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီး ပြည်တွင်းပိုင်းခရီးစဉ်အား တာချီလိတ်မြို့မှ လေကြောင်း ဖြင့် တိုက်ရိုက်ပျံသန်းသော မြို့များဖြစ်သည့် ဟဲဟိုး- ရန်ကုန်- မန္တလေး- မြစ်ကြီးနား- လားရှိုးမြို့များမှ တဆင့် ပြည်တွင်းပိုင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသည်။
တာချီလိတ်နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှတဆင့် ၀င်ရောက်သည့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည် အရေ အတွက်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံသားနှင့် တတိယနိုင်ငံသားအများစု ပါဝင်သော နေ့ချင်းပြန်/ ညအိပ်ခရီးသည် စုစုပေါင်းမှာ (၆၇၃၃၅၈) ဦး ဖြစ်ပြီး မိုင်းဖြတ်၊ ကျိုင်းတုံခရီးစဉ်အနေဖြင့် ခရီးသည်စုစုပေါင်း (၇၄၆၀) ဦးနှင့် ဗီဇာဖြင့် ပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးသည် စုစုပေါင်း (၁၁၈၂၈) ဦးတို့ ၀င်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
Organizingacoordination meeting related to the shooting of Documentary Video Clip by MONAREX HOLLYWOOD Cooperation for Myanmar Tourism Promotion
Nay PyiTaw , December (5)
Ministry of Hotels and Tourism is taking all-out effort for the all -round development of Myanmar hotels and tourism sector, with the intention to support Ministry’s efforts and to make Myanmar beawell- known destination in the world , Mr. Chris D.Nebe , the producer, & his team ,MONAREX HOLLYWOOD COOPERATION,is planning to shootadocumentary video clip about Myanmar’s enchanting natural beauties and landscapes and lovely customs of various ethnic groups. Therefore,acoordination meeting related to this led by Union Minister , U Ohn Mg , was organized at Ruby Hall , Ministry of Hotels and Tourism .
Union Minister for Ministry of Information , Dr ,PeMyint and Dr.WinMyat Aye, Union Minister for Ministry of Social Welfare , Relief and Resettlement , Permanent Secretary of Ministry of Hotels and Tourism , U Barat Sighn and responsible person , Myanmar Tourism Federation and officials from Brother Associations, Mr. Chris D.Nebe, President , MONAREX HOLLYWOOD COOPERATION and officials, Mysterious China Series Document Flims , Myanmar Project aand Yangon Media Group Co.,Ltdwere present at the meeting.
After the opening remark of Union Minister, Managing Director , U ZAw Win Khaing , YAngon Media Group Ltd presented about the activities related to documentary shooting in detail. Then , Union Ministers discussed collaboratively the necessary facts regarding to shooting . And then , Union Minister of Ministry of Hotels and Tourism discussedsome additional points and closed the meeting.